Home TOROHEVITRA FOTOTRA EUROPEAN Mpilalao baolina kitra frantsay Yacine Adli Childhood Tantara miampy Untold Biography Facts
Izahay dia manolotra fitantarana feno momba ny Yacine Adli Childhood Tantara, Biography, Life Life, Faces de suissement, background background, ray aman-dreny, fiainana manokana ary fomba fiaina. Fandinihana feno ny zava-nitranga miavaka hatramin'ny fahazazany ka hatramin'izy nalaza.
Ny fiainana tany am-piandohana sy ny fiakaran'ny Yacine Adli. 📷: Instagram sy Twitter
Eny, ianao ary izaho mahalala fa ny afovoan-tafika fanafihana no heverina iray amin'ireo tanora tsara indrindra ao Eropa mba hiambina hatrany. Na dia izany aza, vitsy ihany no namaky ny Biolojia Yacine Adli, izay tena mahavariana. Izao raha tsy mila ado intsony, andao hanomboka.
Yacine Adli Childhood Tantara:
Ny voalohany sy ny voalohany, dia nomen'ny ray aman-dreny mpanao baolina kitra izy Zinedine Zidane, hira iray izay nanome azy ny anarana feno- Yacine Zinedine Adli. Teraka tamin'ny andro faha-29 jolay 2000 izy, tao Vitry-sur-Seine, kaominina kely iray hita any amin'ny tanàna atsimo atsinanana-atsinanan'i Paris, France.
Yacine Adli dia iray amin'ireo ankizy telo nateraky ny firaisana teo amin'ny ray aman-dreniny, Andriamatoa sy Andriamatoa Abdennour Adli. Dia nipoitra tamin'ny naha-sambatra ny mpilalao baolina kitra frantsay, niaraka tamin'ny zokiny sy ny zokiny lahy izay mitondra ny anarana hoe Lounes Adli.
Ny maha-zanaky ny fianakavian'i Adli dia midika fa zanaky ny ankohonany. Tany am-piandohana, Abdennour (dadan'i Yacine) dia niantoka fa ny zanany rehetra dia nianatra namaky teny tamin'ny efa-taona. Little Yacine dia tsy anjara.
Tsy vitan'izany fa raha ny ray aman-drenin'i Yacine Adli dia nametraka andraikitra bebe kokoa tamin'ny zokiny lahy, dia izy irery no tsy tian'ny ankamaroany. Tsy nalefa hanao raharaha any an-trano i mamany sy ny dadany dia nahita ilay tovolahy nanolotra ny fotoany ho an'ny baolina kitra. Io fihirana io no nahatonga ny daty amboarany miaraka amin'ny lahatra.
Ity ambany ity dia nanohana an'i PSG tamin'ny mbola kely ny zazalahy mahafatifaty ary tena mpankafy ny anarany Zinedine Zidane izay hitany fa tsy ny sampy fotsiny no jereny.
Young Yacine Adli dia nanohana an'i PSG tamin'ny mbola kely. 📷: Twitter
Yacine Adli Fialam-pianakaviana:
Ilay zaza mitsikilo baolina kitra, tsy toy ny goalie frantsay Hugo Lloris sy mpilalao baolina an'arivony Faiq Bolkiah Tsy teraka tamina trano manankarena loatra. Sahala amin'ireo mpandray vola amin'ny salanisa marobe, ny ray aman-drenin'i Yacine Adli no karazana nanorim-ponenana tao anatin'ny iray amin'ireny mponina manodidina dia vondron'olona antonony antonony afovoany Vitry-sur-Seine.
Yacine dia nanana fiarahana sambatra tany am-piandohana tao Vitry-sur-Seine, kaominina frantsay izay mirefy 11.6km miala ny foiben'ny tanàna Paris. Tsy toy ny mpilalao baolina kitra toa azy Ibrahima Konate izay nipetraka tao Paris tamin'ny mbola kely, ny fianakavian'i Yacine Adli dia afaka nijanona tany ambanivohitra ihany.
Nihaza tao Vitry-sur-Seine ny Genius frantsay. Mbola bebe kokoa ihany koa ny manodidina ny fianakaviany mianakavy manodidina ny 11.6km any Paris. 📷: sary sy IG
Avy amin'ny fianakaviana Yacine Adli:
Raha tsaraina amin'ny endrika Arabo mahafatifaty dia fantatray fa mety efa nisaintsaina ianao, amin'ny fahafantaranao ny fireneny sy ny dadany Yacine Adli. Ny marina dia, mpanao baolina kitra, sahala amin'ny Legendary ihany Zinedine Zidane, avy amin'ny fianakaviany avy any Afrika Avaratra, Algeria tsara.
Fantatrao ve? ... Samy an'ny ray aman-drenin'i Yacine Adli avy ao amin'ny tanànan'i Kabylie izay eo akaikin'ny morontsiraka amoron-tsiraka any avaratr'i Algeria. Tsy toy ny mpilalao baolina kitra namany. Riyad Mahrez, Ny fianakavian'i Yacine Adli dia mbola afaka manome vaovao farany ny mety hiseho azy hilalao ho an'ny mpandresy am-piadiana ny tompon-daka any Afrika (Algeria).
Fanabeazana sy fananganana karama Yacine Adli:
Sahala amin'ny ankamaroan'ny ankizy maniry baolina kitra maniry any ambanivohitr'i Paris, ny ray aman-dreny Yacine dia tsy navelany hampandefitra ny fianarany amin'ny baolina kitra tamin'ny voalohany. Ny tranonkala frantsay Acufoot, tao amin'ny tatitra tamin'ny taona 2017, dia nanazava ny fomba nanehoan'ny mpilalao baolina kitra azy an-dakilasy. Yacine Adli no mpianatra mahay izay nijoro teo amin'ireo mitovy taona aminy.
Ireo rehetra nahalala azy dia hanaiky fa tsy zaza manan-tsaina ihany ny mpanao baolina kitra fa ny fifaninanana ary indrindra eo amin'ny sehatry ny fanatanjahantena. Football, izay nilalao tany an-trano sy tany an-tsekoly ihany no fanatanjahantena nampientam-po azy.
Rehefa tonga ny fotoana mety dia nahita ny ray aman-dreny Yacine Adli namela ny zanany lahy hampidi-doza ny fianarany amin'ny sehatry ny baolina kitra.
Ahoana ny fanombohan'ny Football:
Nanao dingana iray hametrahana ny fototry ny asany izy dia nasain'i Yacine Adli nampiditra azy ny dadany tany amin'ny Villejuif amerikana azy, klioba iray izay tena akaikin'ny tranon'ny fianakaviany. Soa ihany fa nisy fitsarana nahomby izy.
Nandritra ny vanim-potoana niainany voalohany, dia niteraka zaza marim-pototra ilay tovolahy, izay nahazo laza maro tsy ho an'ny kilalaony fotsiny fa nanao sorona hafahafa tamin'ny endriny mahafinaritra.
Indray mandeha, ny mpanazatra azy antsoina hoe Moulay Chebab dia nanao fitantarana ny fahatapahan'i Yacine Adli hahomby. Amin'ny tenin'ny mpanazatra teo aloha;
Natory teo amin'ny kianja i Yacine, izay hitako dia saika isan'andro. Izy dia ankizy tia miasa mafy sy mazoto.
Tsy nahatohitra ilay hevitra tsy ho very ity tovolahy ity. Tiany, miresaka ary mihinana baolina kitra izy.
Na rehefa hamangy ahy aza izy, dia tsy hiala izy raha tsy mandefa baolina.
Yacine Adli Biography- Lalana ho Fame Tantara:
Tamin'ny alàlan'ny asa mafy sy ny fanetren-tena, ny tanora Yacine tsy tamin'ny fotoana rehetra dia lasa mpilalao tsara indrindra teo amin'ireo ankizy rehetra nilalao tany US Villejuif. Ny zavatra iray dia nanjary azo antoka tamin'ny fotoana nanjary hazavana indrindra. Ny zava-misy fa ny klioba lehibe, ny tia PSG dia ho tonga hanafika ny talentany.
Mba hiatrehana fifaninanana lehibe kokoa ary amin'ny fikasana hiantsoana ny tanora nasionaly frantsay, dia navelan'ny ray aman-dreny Yacine Adli ny zanany lahy hiditra PSG. Soa ihany, ny kintan'ny filalaovana baolina kitra dia nahazo ny antso an-telefaona U16 frantsay roa taona taorian'ny nahatafiditra ireo goavambe frantsay.
Rehefa nanao sorona farany ny fianakaviany:
Fantatra ny fanirian'ny zanany hahomby, ny dadan'i Yacine Adli, Abdennour, dia voatery nandao ny asany mba hifantohany amin'ny fampandrosoana ny zanany. Raha nahita fa ny zandriny indrindra amin'ny fianakavian'i Adli dia hahalehibe azy, ny zokin'i Yacine lehibe, Lounes dia nanapa-kevitra ihany koa fa handray alalana amin'ny fahazoan-dàlana amin'ny alàlan'ny fanantenana hanohana ny zandriny lahy.
Yacine Adli Biography- Ahoana no nahombiazany:
Noho ny ezaka mafy nataony sy ny ezaka mafy nataon'ny fianakaviana, ny baolina kitra nampanantenaina dia nanjary iray tamin'ireo afovoan'ny mpampita fahirano indrindra tamin'ny fahatanorany. Raha jerena eto ambany dia nahavita fahombiazana maro i Yacine tao amin'ny akademia sy ny sehatra nasionaly.
Fahombiazana lehibe ho an'ny mpilalao baolina kitra frantsay nampanantenaina ny tanora eo ambany klioba sy firenena. 📷: Instagram
Tamin'ny taona 2018, nahazo diplaoma tamin'ny tanora PSG tamin'ny zaza nanidina loko miloko ny zaza. Taorian'ny fizarana diplaoma dia nanohy ny herintaona niarahany niasa tamin'i Paris Saint-Germain B. Nandritra ny fotoana dia teo no mpanazatra ny lohany Unai Emery, tsara fanahy ny fanampiana ny tanora handray ny lazany.
Ny maha-mpilalao zokiolona amin'ny faha-18, raha ny tokony ho izy dia midika hoe miatrika fifaninanana amin'ny ekipa toy ny PSG. Voalohany, ny fandaozan'i Emery malalany an'i Arsenal dia namorona kambana. Taorian'ny fialan'ny Aaron Ramsey, Emery dia nitady safidy hanakarana ny Gunnes midfield sy izy roa Denis Suarez niaraka tamin'i Yacini lasa kandida ambony.
Mampalahelo fa ny famindrana dia nijanona aorian'ny mpanazatra PSG vaovao avy eo Thomas Tuchel's -tsehatra. Ny tapany tamin'ny savony dia nifarana taorian'ny nanapahan-kevitra i Unai Emery handeha Mattéo Guendouzi. Noho ny fanodikodinam-bola nataon'ny mpiasan'ny PSG kilasy avo lenta taminy, dia nanapa-kevitra ny handeha hanaporofo ny tenany any Bordeaux i Yacine Adli, izay nataony tamin'ny loko manidina (Porofo an-tsary eto ambany).
Amin'ny fotoana hametrahana ny Biolojia Yacine Adli, ny prodigy zatovo PSG dia efa mametraka anarana ho azy miaraka amin'i FC Girondins de Bordeaux.
Yacine dia miadana nefa azo antoka fa mitombo ao anatin'ny iray amin'ireo ny afovoany afovoany afovoany indrindra 'sarobidy. Ny ambiny, araka ny nambarantsika, dia tantara.
Yacine Adli tia fiainana- sakaiza, vady?
Hatramin'ny nametrahana anarana ho azy dia nanomboka nisaintsaina ny tantaram-piainan'ny mpilalao baolina kitra frantsay ny mpankafy mpanadihady. Mba hilazana ny marina, dia i Yacine Adli no isanay hofidin'ny iray amin'ireo folo voalohany mpilalao mpilalao baolina kitra indrindra Eto amin'izao tontolo izao. Tsy azo lavina ny zava-misy fa ny fisehony tsara tarehy dia tsy hahasarika vehivavy sipa - na dia ireo izay mihevitra ny tenany ho vady aza.
Satria matanjaka sy tsara tarehy izy, dia efa nanontany ny mpankafy… Iza no sakaizan'i Yacine Adli? 📷: Instagram
Ilay mpilalao baolina kitra tsara tarehy amin'ny fotoana nanoratana dia toa nanao ezaka mitadidy fa tsy hampiharihary ny sakaizany na ny vadin'ny ho avy. Na izany aza, mety ho i single Yacine (amin'ny fotoana nanoratana), fanambarana izay midika fa tsy misy WAG.
Azafady, ianao sy ny fahalalako fa ny baolina kitra dia mety tsy ho voavela heloka rehefa mifangaro azy amin'ny resaka fifanarahana, indrindra eo amin'ny sehatry ny asa voalohany. Mety ho antony izay mbola nanehoan'i Yacine ilay sipany izany.
Yacine Adli Fiainana Manokana:
Avy lavitra amin'ny baolina kitra, ny toetra voalohany nahamarika ny mpilalao baolina dia ny "Maturity." Nilaza i Lounes, zokiny, fa i Yacine dia olona saro-kenatra sy misaina, olona nifikitra tsara tamin'izay nahita azy nahalehibe. Izany, ankoatry ny hafa, no antony mahatonga ny olon-drehetra tiany.
Ary momba ny fiainany manokana ihany koa, ny kintana misandratra dia manana ny toetran'ny famantarana Zavakin'ny homamiadana. Fantatrao ve? ... Iray amin'ireny toetra ireny ny fananan'ny olona zodiaka dia ny fitovizany amin'ny fialan-tsasatra eo akaikiny na ao anaty rano.
Ny zava-misy momba ny fiainana manokana an'ny kintana frantsay dia mampiseho zavatra tsy mbola fantatrao momba azy. 📷: Instagram
Matetika miaraka amin'ny rahalahiny, i Yacine Adli dia milalao sangan'asa. Tian'ilay kintan'ny baolina ihany koa ny violon, piano sy gitara. Nianatra nitendry gitara tamin'ny fampiofanana amin'ny sofina izy. Adli indray mandeha dia nilaza fa ho tiany raha nanoratra azy tao amin'ny sekoly mozika mozika ny rainy.
Yacine Adli Fiainana:
Ahoana no fomba lanin'ny mpanao baolina ny volany?… Voalohany, tsy misy zavatra toy ny fomba fiaina na exotic. Ho fanombohana dia i Yacine Adli izay manana harato manodidina ny 300,000 XNUMX euros dia miaina fiainana voalamina, tsy misy fandaniana tsy ara-dalàna amin'ny zavatra toy ny trano lehibe sy fiara matanjaka.
Fomba fiaina Yacine Adli- Ahoana ny fandaniam-bola ny volany, 📷: IG
Fiainam-pianakaviana Yacine Adli:
Ny ankamaroan'ny olona izay manana mpilalao baolina kitra ao an-tranony dia miezaka ny hanao azy ireo, indray andro, amim-pireharehana mitondra ny anaran'ny fianakaviana eo amin'ny sehatra lehibe indrindra. Toy izany ny toe-karena miakatra ny kintana frantsay. Amin'ity fizarana ity, hanambara aminao bebe kokoa momba ny fianakavian'i Yacine Adli manomboka amin'ny ray aman-dreniny ianao.
Momba ny Ray sy Renin'i Yacine Adli:
Manomboka, ireo ray aman-dreny dia samy manana ny vinavinan'ny fahitana izay miaraka amina zanany telo dia miforona ao anaty trano akaiky. Fantatrao ve? ... Nahazo aingam-panahy avy hatrany i Abdennour sy ny vadiny Lebron James, Kylian Mbappe ary Neymar mitantana tokantrano mifototra baolina kitra. Na ny dadan'i Yacine sy ny maman'izy ireo dia mahita ireo mpilalao baolina kitra etsy ambony toa ny olona manana fisian'ny fianakaviana lehibe eo amin'ny sehatry ny asa.
Ny lalan'ny Adli mankany amin'ny tantaram-piainana malaza dia nahita ny dadany nanao sorona farany nandao ny asany mba hahafahany manohana ny zanany lahy amin'ny avo indrindra. Androany i Abdennour dia mijinja ny fahombiazan'ny zanany lahy.
Yacine Adli Anadahy:
Araka ny Eurosports France, Yacine dia manana rahavavy efa zokiny sy rahalahy iray antsoina hoe Lounces Adli. Voalohany indrindra dia ny zokiny vavy dia mari-pahaizana mianatra amin'ny serasera sy marketing, amin'ny fiheverana ny fampiharana ilay saha hanampiana ny zandriny lahy.
Amin'ny lafiny iray, ny rahalahin'i Yacine lehibe (Lounes Adli) dia eny amin'ny anjerimanontolo ihany, izay nandalina ny fitantanam-bola ara-toekarena. Rehefa vita ny fianarany dia nanohy fianarana i Lounes tamin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana ny fahazoan-dàlana maha-mpisolovava azy. Nanao an'izany ilay rahalahy lehibe ka mba ho lasa ilaina amin'ny asan'ny Yacine ihany koa izy. Fianakaviana akaiky
Zava-misy # 1- Ny fahatapahan'ny karamany ratsy dia mampiseho ny toetrany:
Ny safidy ho an'ny mpilalao baolina kitra handao ny PSG amin'ireo mpifaninana amin'ny ekipa FC Girondins de Bordeaux dia tsy vola ho an'ny vola araka ny fahitana azy amin'ny fahatapahan'ny karamany. Yacine dia mpilalao baolina matotra izay mahalala fa tsy, amin'ny fotoana fohy, dia manome azy lehibe na amin'ny resaka asa sy ny karama.
Per Year € 336,000 £ 297,121 $368,608
isam-bolana € 28,000 £ 24,760 $30,717
Isan-kerinandro € 7000 £ 5,705 $7,078
Isan'andro € 1000 £ 815 $1,011
Per Hour € 41.6 £ 33.96 $42
Isaky ny Minut € 0.69 £ 0.57 $0.71
Per segondra € 0.01 £ 0.009 $0.01
Izany no YACINE ADLI nahazo tombony hatramin'ny nanombohanao ity pejy ity.
Fantatrao ve? ... Tokony hiezaka mafy ny olom-pirenena frantsay izay mahita $ 3,093 sivy taona ary iray volana mba hanamboarana izay azon'ny Yacine afaka iray volana. Wao! Midika izany fa tsy kely loatra ny karamany tahaka izay noheverinay.
Zava-misy # 2- Prospect FIFA:
Yacine, amin'ny fahazazany 19 taona, dia mety hananana olona iray Midfielders lehibe indrindra amin'ny taranany. Amin'izao vanim-potoana malefaka izao dia efa mibontsina miaraka amin'ny fifehezana baolina, fahitana, fahatoniana, mahitsy ny FK, herinaratra voatifitra, fanapotehana ary fandalovana fohy ny afovoan-tongotra 6.
Ny FIFA Potensial dia mampiseho fa natao ho lasa iray amin'ireo midfielders lehibe indrindra amin'ny taranany izy. 📷: SoFIFA
Zava-misy # 3- Nizara ny Tompony tamin'ny Football Football Top izy.
Fantatrao ve? ... Manana fananana i Yacine Adli na eo aza ny fidiran'ny fianakavian'izy ireo hitantana azy. Ny mpilalao baolina kitra dia mizara mpizara mitovy amin'ireo mpilalao frantsay namany - ny tiana Moussa Sissoko, Ousmane Dembele sy Layvin Kurzawa.
Zava-misy # 4- Mitovy anarana amin'i Zidane izy:
Fantatrao ve? ... Ny ray aman-dreny Yacine Adli raha vao teraka dia nahatonga azy hitondra ny anarana (Zinedine) taorian'ny lalao Frantsay Football Football Zinedine Zidane. Mety ho antony roa no nomena azy azy. Ny voalohany dia ny fianakavian'i Yacine Adli dia manana fiandohana Algeriana mitovitovy amin'ny tompon-daka eran-tany frantsay 1998, Zidane.
Faharoa, mety ho fomba fanomezam-boninahitra ilay mpanao baolina izany, noho ny fitrandrahana azy tao amin'ny amboara eran-tany frantsay 1998. Aza adino fa ny tenantsika manokana Yacine dia teraka roa taona taorian'ny amboara eran'izao tontolo izao.
Feno anarana: Yacine Zinedine Adli
teraka: 29 Jolay 2000 (19 taona raha tamin'ny Mey, 2020).
Fianakaviana: Tanànan'i Kabylie, Algeria.
Ray aman-dreny: Andriamatoa sy Andriamatoa Abdennour Adli
rahalahy: Lounes Adli (Agent de Agent)
anabavy: Manana diplaoma fifandraisana sy marketing izy
Haavo ambony any Feet: 6 tongotra ary 1 santimetatra
Haavo amin'ny meters: 1.86 M
fialam-boly: Milalao Violin, Piano ary gitara.
Vidy net: 300,000 2020 € (tarehimarika, XNUMX).
Misaotra anao namaky ny tantaran'ny fahazazana sy ny tantaram-piainan'i Yacine Adli. Manantena izahay fa nahafaly azy io. Ny tonian-dahatsoratry ny LifeBogger dia mikatsaka ny hisian'ny fahamarinana sy ny rariny amin'ny fanazaran-tena andavanandro amin'ny fampitana ny tantaram-piainana sy ny tantaram-piainan'ny mpilalao baolina kitra.
Mifandraisa aminay, na raha mahita zavatra tsy mifanaraka tsara amin'ity lahatsoratra ity ao amin'ny Adli ianao. Raha tsy izany, ambarao aminay ao amin'ny fizarana fanehoan-kevitra, izay hevitrao momba ny mpilalao baolina kitra manana fanantenana antenaina tsara.
Karim Benzema ny tantaram-pitiavana momba ny tantaram-pitiavam-bolo mbola tsy fantatra